Cookies voasary vita amin'ny Thermomix. Mora sy matsiro | ThermoRecipes
Desayuno30 minitraOlona 21
Androany dia manolotra zavatra matsiro aho Cookies Orange. Mora tokoa ny manamboatra azy ireo ary tena matsiro.
Tsy misy masirasira ao amin'izy ireo simia. Hanao azy ireo amin'ny soda kely sy vinaingitra eran'ny sotrokely isika. Aza manahy fa tsy tsikaritrao amin'ny tsiro. Zava-dehibe raha vantany vao vonona ny koba, dia mamorona ny mofomamy isika ary manamboatra azy ireo. Aorian'izay, haingana, dia hiakatra ny cookies. Avelako ho anao ny rohy mankany amin'ny mofomamy spaoro noho ity fanehoan-kevitra simika ity: Mofomamy spaonjy tsy misy atody
Nivoaka tany amiko izy ireo 21 unidades. Omaly aho no nanao azy ireo ary efa misy 5 sisa… Tsy holazaiko anao intsony.
1 Cookies voasary ao amin'ny Thermomix
Cookies voasary ao amin'ny Thermomix
Mofomamy misy tsiro volomboasary matsiro. Tena mora ny miomana.
Ny hoditry ny volomboasary 1 (ny ampahany volomboasary ihany)
Ranom-boasary 25 g
270 g ny lafarinina
Vinaingitra paoma sotrokely 1 sotrokely
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 180º izahay. Izahay dia manamboatra ny lovia fandrahoana amin'ny alàlan'ny fandrakofana azy amin'ny taratasy fanaova.
Apetrakay ao anaty vera ny siramamy sy ny hoditry ny voasary (mitandrema, tsy misy ilay faritra fotsy). Izahay dia manao fandaharana 15 segondra, hafainganam-pandeha 10. Ampidinintsika miaraka amin'ilay spatula izay sisa tavela amin'ny rindrin'ny vera.
Arotsaho amin'ny antsasaky ny dibera ny atody, ny ranom-boasary, ny lafarinina ary ny soda. Izahay dia manao fandaharana 25 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Ampidinintsika miaraka amin'ilay spatula izay sisa tavela amin'ny rindrin'ny vera. Ampio ny vinaingitra sy ny programa 5 segondra, hafainganam-pandeha 6.
Mamorona baolina, amin'ny tanantsika, manodidina ny 25 grama izahay ary apetrakay eo amin'ny lovia fanaova-mofo efa rakotra taratasy fanaova izany.
Torotorointsika kely amin'ny tanantsika ny cookie tsirairay, na, tahaka ny nataoko, tamin'ny lolo marindrano (izany no anaovanay ireo marika kely hitanao eo amin'ny cookies).
Apetrakay ao anaty lafaoro haingana ny lovia, haingana. Mofomamy amin'ny 180º mandritra ny 20 minitra na mandra-volontsôkôlà volamena ary masaka tsara ao anatiny.
Avelao hangatsiatsiaka ary hankafizo!
Fanazavana fanampiny - Mofomamy spaonjy tsy misy atody
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Fivarotana mofomamy » Cookies Orange
Ahetsiketsika ny ronono voanjo
Sakafo pizza mora sy matsiro